JACK TZU MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Jack Russell Terrier / Shih Tzu ey isku dhafan oo isku dhafan
'Tani waa Max, isku darka Jack Russell / Shih Tzu. Isagu ma ahan eey naqshadeeye hal se, laakiin in badan oo shil ah. Isagu waa eeyaha ugu fiican weligiis! Hooyadiis waxay ahayd qof caan ah oo caan ah Shih Tzu aabihiisna wuxuu ahaa lug-gaaban oo jilicsan oo jilicsan oo Jack Russell ah oo ku dhacay booqashada guryaha deriska la ah. Wuxuu soo bandhigayaa astaamo ka yimid labada nooc wuxuuna noqon karaa mid firfircoon sida Jack Russell, laakiin sidoo kale waa eey jilicsan oo jilicsan sida Shih Tzu. Xaqiiqdii wuxuu heystaa jaakada Shih Tzu sida aad sawirada ku garan karto, laakiin wuxuu leeyahay lugaha dhaadheer ee JRT iyo sankiisa iyo wejigiisa ayaa aad uga dheereeya sida JRT oo uma siman sida Shih Tzu. Max aad buu u caqli badan yahay laakiin madax adag noqon karaa . Wuxuu helay astaamaha argagax ee qodista si hubaal ah iyo sidoo kale awoodda boodboodka Jack Russell! Wuxuu u boodayaa sida lugaha oo kale ay yihiin ilo! Iskusoo wada duuboo, isagu waa isku dhafka labada waalid mana ku farxi karno shilka noocan oo kale ah inuu dhaco oo aan abuurnno isku dhafnaan u gaar ah! '
Jack Tzu ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Jack Russell Terrier iyo Shih Tzu . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
'Tani waa Aleasha. Hooyadeed waa Shih Tzu / Jack Russell isku dhafka aabaheedna waa Shih Tzu oo asal ah. Aleasha waa eey aad u bulsheed. Waxay jirtaa 3.5 bilood iyo 5lbs sawirkaan. Waxay jeceshahay ciyaarta soo-qaadashada, iyadu waxbay is bartay. Waxay jeceshahay inay leefleexdo oo ay ku jeclaato. Wuxuu jecelyahay socodsiinta ardaaga weyn iyo gawaarida. Waxay si musqul ah ugu tababartay si fudud. Iyadu ma aha qof wax cuna oo si dhib leh u daadiya. Waxay jeceshahay alaabta ay ku ciyaarto! Ninkeygu wuxuu xasaasiyad ku leeyahay eeyaha laakiin iyada kuma qabo. Aleasha weligood ma ciyoodaan oo ilaa hadda waa mid aad u addeecsan. Waxay jeceshahay dhigista qorraxda. Waa sanduuq tababaran oo waxay jeceshahay sanduuqeeda. Way ku weyn tahay carruurta iyo carruurta. Wey heysataa nabarrada dhiig-baxa . Waxaan u ogolaanay inay ku oroddo dayrka.
Harry Bosch the Jack Tzu markuu 9 bilood jiray— Waxaan dooranay Harry Bosch ka dib bilooyin aan raadineynay. Hooyadiis waa malab qurux badan oo leh midab dheer Jack Russell. Aabihiis wuxuu ka yimid khadka boqortooyada ee Shih Tzu. Labada waalidba way yaraayeen. Harry wuxuu ahaa mid aan caadi aheyn laga soo bilaabo maalintii aan soo qaadnay. Wuxuu horey u lahaa hangoolka inuu sameeyo ganacsiga banaanka marka laga soo bilaabo 9 toddobaad, waxaan kaliya galnay 3 shil oo iyagu iyagu asaga khalad ma lahayn. Wuxuu had iyo jeer ahaa mid bulsheed oo xitaa hadda oo uu joogo 9 bilood wuxuu yaqaanaa sida loola macaamilo eeyaha waaweyn. Soo Gudbi !! dhabarkiisa iyo dhunkasho badan. Isagu waa waalan yahay kubbadiisa wuuna u qaadan doonaa carruurta beerta nasashada si ay isaga ugu tuuraan. Isagu waa dhaqdhaqaaq badan yahay wuxuuna u qabsan karaa sida kubbadda cagta oo kale! Waxaan haystaa caruur saf ugu jira si ay ula ciyaaraan, wuxuuna ciyaarta la qabsadaa furaha aadka u hooseeya ee da'diisu tahay 14 bilood. Runtii waa eeygayaga qumman. '
'Kani waa isku darka Jack Russell Terrier x Shih Tzu. Wuxuu ka yaraa 1 sano waana firfircoon yahay. Wuu jecel yahay socod dheer runtiina waan ku raaxaystaa inaan ku dhex wareego aag xayndaab ah. Had iyo jeer wuu faraxsan yahay wuuna ruxruxaa dabadiisa wuxuuna jecel yahay inuu ku ciyaaro alaabtiisa uu ku ciyaaro. Isagu waa jecel yahay oo isagu inta badan ma ciyo mana qaniino. Isagu waa caqli badan yahay wuuna istaagi karaa kuna socon karaa lugaha dambe. Wuxuu jecel yahay inuu qodo oo leefleeco sida waalan! Waxaan ka soo qaadnay sida eey saaxiibkiis ah oo aan sii daryeeli karin isaga. Waxay ka soo iibsatay nacsi sumcad leh. Ku raaxayso!
'Tani waa Frankie 'Jack Shihtz' (Jack Russell / Shih Tzu mix). Waxa uu leeyahay dhammaan tayada ugu fiican labada nooc: caqli, jimicsi, qosol badan, madax adag , duurjoog ah iyo koolkoolin. Ey firfircoon oo cajiib ah iyo xiddig filim ah. '
'Kani waa wiilkeyga yar ee qurxoon Alfie oo ah eey qiyaastii ah 11 toddobaad. Isagu waa iskutallaab Shih Tzu iyo Jack Russell. Waxay umuuqataa inay sifiican ushaqeysay asaga! Wuxuu leeyahay shakhsiyad fantastik ah, fudeyd leh, oo aan faraxsaneyn oo qof walba saaxiibtinimo la leh (eeyaha iyo aadanaha). Wuxuu umuuqdaa degenaansho iyo 'dog dog dhabta' ee Shih leh shakhsiyad qurux badan, kalsooni leh oo Jack Russell ah. Waxaan u maleynayaa inuu isna qurux badan yahay Dadku waxay dhahaan wuxuu umuuqdaa nin udhashay Boston, laakiin waxaan lakulmay waalidkiis waxayna ahaayeen lamaane aan caadi ahayn!
'Tani waa eeygayga. Magaceedu waa Daisy. Iyadu waa isku-darka Jack Russel / Shih Tzu, oo lagu muujiyey halkan qiyaastii 1 iyo badh jir. Waxay eegtaa oo qaadataa Jack Jack ka badan Shih Tzu, laakiin iyadu ma laha dhibco sida Jack Russell ah. Dhibcaha kaliya waa sankeeda iyo gudaha afkeeda. Wey heysataa tamar badan waana eey aad loo jecelyahay. '
Daisy the Jack Russell / Shih Tzu mix as a puppy at 3 bilood jir
Isku darka Jack Russell / Shih Tzu markay jiraan 1 sano jir
Max ugu darso Jack Russell / Shih Tzu sida eey markay jiraan 10 toddobaad
Jack Jack the Jack Tzu oo 7 jir ah— '' Jack waa eeyga ugu daacadsan ee aan abid leeyahay. Isagu waa nin caqli badan oo nasteexo leh. Wuu fadhiisan doonaa isagoo ku iibsan doona haddii aad jiran tahay, oo wuu ku heli doonaa socodkiisa . Markuu sii weynaaday ayuu dib u sii nastay. Wuxuu daadiyaa sida kuwa kale, taas oo ah khasaaraha kaliya ee haysta isaga. Noocan isweydaarsiga ahi waa isku darka maskaxda, daacadnimada, iyo zen. '
Jack Tzu Sawirada Page 1
Jack Tzu Sawirada Bogga 2
isku-darka shaybaarka isku-darka mastiff
eeyaha culeyskoodu yahay 50 rodol
eey Shiinaha isku darka poodle crested
bulldogs mareykanka bunni iyo cadaan ah
buluug heeler australia australia adhijir collie mix
pictures of muqisho hound sax buluug